आजको राशिफल ( वि.सं. २०७७ असोज ८, बिहीवार) - Rastrakokhabar
आजको राशिफल ( वि.सं. २०७७ असोज ८, बिहीवार)
८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०६:३०
आवश्यकता पूरा हुनेछ र मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ। काम रोकिए पनि रकम प्राप्त हुनेछ। उद्योग र व्यापारमा सामान्य फाइदै हुनेछ। विगतका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। तर समयमा सजग नहुँदा आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। आकस्मिक समस्याले सञ्चित रकम खर्चनुपर्ला। आवश्यकता पूरा गर्न सरसापट लिनुपर्ने हुन सक्छ।
Previous Post	बाढीले जीप बगाउँदा एक जनाको मृत्यु
Next Post	आइपीएलमा मुम्बई इन्डियन्सको पहिलो जित